Fahaiza-manao tena izy amin'ny tena fiainana miaraka amin'i Hodges Connect »Hodges U
Sokajy: Hodges Connect
Mpiasa ve ianao mitady ny fifaninanana avo lenta ambonin'ny fifaninanana? Misafidiana Hodges Connect
Fa maninona Fomba fanao iray manokana, Hodges Connect no lakilen'ny fananganana ny resume sy ny fampandrosoana ny asanao.
Azonao atao ny misafidy ireo atrikasa, kilasy ary programa izay hanome anao ny fahaizana eo noho eo azonao raisina hiara-miasa aminao ny ampitso. Fanampin'izay, mahazo ny fanohanan'ny andrim-pampianarana ambony 30 taona sy ny anaran'ny Hodges University ianao. Fa tsy toy ny a mari-pahaizana na fanamarinana nentim-paharazana, izay manampy anao hiakatra amin'ny toerana misy anao ihany no safidinao. Na manana mari-pahaizana ianao na tsia, ireo mari-pahaizana ireo dia ahafahanao mijoro eo ambonin'ny fifaninananao amin'ny sehatry ny asa anio.
Tsy misy fitsapana mialoha fidirana
Tsy ilaina ny fanandramana amin'ny oniversite teo aloha
Tsy ilaina ny diplaoman'ny lisea
Ireo No rehetra ireo dia manampy amin'ny Eny lehibe ho anao! Te hahalala bebe kokoa?
Mifandraisa amina solontena Hodges Connect
Ry mpampiasa, maninona no mifandray i Hodges?
Mangataka vahaolana ny mpampiasa mba hanidiana ny banga tsy fahaiza-manao. Hodges University dia mamaly io antso io miaraka amina hetsika fanofanana matihanina, Professional Education and Training (PET), antsoina hoe Hodges Connect.
"Hodges Connect dia natao hanomanana ny mpiasa miaraka amin'ny fahaizana takian'ny mpampiasa ilaina mba hahombiazana eo amin'ny tsenan'ny asa ankehitriny sy rahampitso," hoy ny Dr. John Meyer, filohan'ny Oniversite Hodges. “Ity sehatra vaovao ity dia azo namboarina mba hifanaraka amin'ny indostria rehetra ary aterina amin'ny olona na vondrona orinasa. Izany rehetra izany dia ny hanomezana ny mpiasanay hery ho an'ny fifaninanana. ”
Iza ireo indostria afaka mahazo tombontsoa amin'ity programa ity?
Ny fikambanana rehetra amin'ny indostria rehetra dia misy zavatra azo azo amin'ny fampitomboana ny fahaiza-manao napetraka ho an'ny mpiasa ao aminy.
Inona avy ireo lohahevitra ho raketin'i Hodges?
Atrikasa momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny orinasa, fifandraisana, fitarihana ary fahasamihafana. Ohatra amin'izany ny:
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny taranja
Mifindra eo amin'ny mpiara-mianatra mankany amin'ny mpitarika - Fampiofanana ho an'ny mpitantana vaovao
Mitarika amin'ny fanovana
Fototra momba ny fitenenana
Fanentanana ny mpiasa
Fanararaotana eo amin'ny toeram-piasana
Orinasa sy fifandraisana
Taratasy fanamarihana mahomby (PEC)
Fanamarinana ilaina amin'ny toerana ilaina
Taratasy fanamarinana mpanara-maso voalohany
AWS Academy Cloud Fototra
Fototry ny famolavolana sary (Adobe CC)
Fototry ny famolavolana tranonkala (Adobe Dreamweaver)
Lisitra fampianarana teknolojia feno
Lisitra làlana Abobe feno
Karazana fiofanana momba ny fanampiana CPR / fanampiana voalohany / fiainana fototra:
Heartsaver fanampiana voalohany CPR AED
BLS (Mpampianatra notarihina sy namboarina)
Ny PET Hodges Connect Initiative dia manana programa fanampiny ary mikasa ny hanampy tsy tapaka ny tolotra vaovao araky ny baikon'ny indostria.
Tsindrio eto raha mila lisitr'ireo programa Hodges Connect feno